क्रान्तिकारी आचरणबिना समाजवादको कल्पना नगर्नुस : चे-ग्वेभारा – JanaSanchar.com
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७७ श्रावण ११, आईतवार) १०:५१
प्रिय साथी, हुन त टिप्पणी लेख्न अलि ढिलो भइसकेको छ, तापनि आफ्नो बाचा पूरा गर्ने आशासहित मैले अफ्रिकाको यात्राको क्रममा यी टिप्पणीहरु लेखिरहेको छु। माथि उल्लेखित शीर्षकअनुरुप टिप्पणीहरु लेख्ने प्रयत्न गर्नेछु। मलाई आशा छ – पाठकहरुका लागि यो रुचिकर हुनेछ।
हामी सबैलाई थाहा छ- क्रान्तिकारी संघर्षको शुरुआत २६ जुलाई, १९५३ मा भएको थियो, जुन संघर्ष पहिलो जनवरी १९५९ मा समाप्त भएको थियो। २६ जुलाईको दिन बिहान सबेरै ओरियन्ट प्रान्तको मोन्काडा छाउनीमाथि फिडेल क्यास्त्रोको नेतृत्वमा रहेको एउटा समूहले आक्रमण गरेको थियो। त्यो आक्रमण असफल भएको थियो। यो असफलताले ठूलो बिपत्ति ल्यायो। जीवित रहनु भएका मानिसहरुलाई बन्दी बनाइयो। मुक्त भएपछि उहाँहरुले फेरि शुरुदेखि क्रान्तिकारी संघर्षको सूत्रपात गर्नुभयो।
सम्पूर्ण सफलता प्राप्त गर्नका लागि यी सबै कामहरु गर्नु र विविध उपायहरु प्रयोग गर्नु जरुरी छ, विशेषगरी क्रान्तिकारी संस्थानहरुजस्ता संस्थागत रुप र संयन्त्रहरु निर्माण गर्नु आवश्यक छ। क्रान्तिलाई संस्थागत रुप दिने अवधारणा भनेको भविष्यतिर एकसाथ अगाडि बढिरहेका करोडौं मानिसहरुको भीडको छविसँग मेल खान्छ। यसलाई समानान्तर नहरहरुको सामञ्जस्यपूर्ण संगीतमय जलप्रवाह वा राम्ररी तेल राखिएका मेशिनहरुको लयात्मक आवाजको रुपमा तुलना गर्न सकिन्छ, जसले भविष्यतिर अगाडि बढिरहेको यस मार्चलाई मलजल दिन्छ। यही कुराले, यिनै सबका बीच, अगुवाका रुपमा अग्रिम पंक्तिमा बसी अगाडि बढिरहेकाहरुलाई प्राकृतिक छनौटको अवसर प्रदान गर्छ। जसले निर्माण हुँदै गइरहेको समाजमा आफ्ना कर्तव्यहरुको पालना गर्छन्, तिनीहरुलाई पुरस्कार प्रदान गरिन्छ र जसले निर्माण हुँदै गरेको समाजविरुद्ध अपराधिक काम गर्छन्, तिनीहरुलाई सजायँ दिइन्छ।
क्रान्तिलाई संस्थागत रुप दिने कार्यलाई विस्तारै–विस्तारै अगाडि बढाउने उद्देश्यले केही प्रयोगहरु गरिँदैछन्, तर यसमा कुनै हतारोपना भने देखाइएको छैन। यसरी प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो क्रमलाई एउटा डर–त्रासले अत्याधिक रुपमा अवरोध खडा गरिरहेको छ। त्यो डर–त्रास हो : कहिँ औपचारिक रुपाकृतिहरुले हामीलाई आफ्नो उद्देश्यबाट विचलित पार्ने त होइनन् ? कहिँ औपचारिक संरचनाहरुले हामीलाई जनताबाट, आफ्नो सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्रान्तिकारी उच्च अभिलाषाबाट अलग्याउने त होइनन् ? मानिसलाई आफ्नै एकलकाँटेपनाबाट मुक्त गर्ने उच्च अभिलाषाबाट हामीहरु विचलित हुने त होइनौं ?
हो, हामीले एक्काइसौं शताब्दीको मानवको सिर्जना गर्नुपर्छ। यद्यपि यो आकांक्षा अहिले पनि मनोगतवादी र अव्यवस्थित छ। तापनि हाम्रो अध्ययन र हाम्रो श्रमको एउटा आधारभूत उद्देश्य भनेको सर्वथा यही नै हो। यस उद्देश्यमा विचारधारात्मक आधारमाथि उभिएर जे जति हदसम्म हामीले ठोस उपलब्धिहरु प्राप्त गर्न सक्छौ, अथवा, हाम्रो ठोस अध्ययन– अनुसन्धानको आधारमा यस उद्देश्यको सन्दर्भमा हामी मोटामोटी रुपमा जे जति हदसम्म सैद्धान्तिक निष्कर्षहरुसम्म पुग्न सक्छौ, ती सबै उपलब्धि र निष्कर्षहरु मार्क्सवाद–लेनिनवादका लागि, मानवताको हितका लागि हामीले दिएका निकै नै मूल्यवान योगदानहरु हुनेछन्।
अब म केही निष्कर्षहरु प्रस्तुत गर्छु :
हामी समाजवादीहरु बेसी स्वतन्त्र छौं, किनकि हामी धेरै सन्तुष्ट छौं, हामी बेसी सन्तुष्ट छौं, किनकि हामी धेरै स्वतन्त्र छौं। हाम्रो सम्पूर्ण स्वतन्त्रताको ढाँचा निर्माण भइसकेको छ; तर त्यसलाई मासु भर्नु र साजसज्जा गर्नु जरुरी छ। हामी यसको सृजन गर्नेछौं।
हाम्रो स्वतन्त्रता र त्यसको दैनिक सुरुक्षाका लागि हाम्रो रगत र बलिदानको आवश्यकता छ। हाम्रो बलिदान सचेततापूर्वक हुन्छः यो बलिदान हामीले निर्माण गरिरहेका स्वतन्त्रताका लागि किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुन्छ।
हाम्रो बाटो लामो छ र आंशिक रुपमा हाम्रो बाटो अज्ञात पनि छ। हामी हाम्रा सीमाहरुप्रति सचेत छौं। हामीहरुले एक्काइसौं शताब्दीको मानव सिर्जना गर्नेछौं; हो हामी आफैंले! दैनिक कारबाहीको अग्निपरीक्षामा होमिएर हामी आफूलाई इस्पात बनाउनेछौं र एउटा नयाँ प्रविधियुक्त नवमानव कुँद्नेछौं।
व्यक्तिले जनपरिचालन र नेतृत्वको भूमिका त्यति हदसम्म मात्र खेल्न सक्छ, जति हदसम्म उसले जनताका सर्वोच्च गुणहरु र उच्च अभिलाषाहरु बोक्न सक्छ र बाटोमा दिग्भ्रमित नभइकन अगाडि बढ्न सक्छ। बाटो पहिल्याउने, त्यसबारे स्पष्टता हासिल गर्ने काम भनेको अगुवा समूहको कर्तव्य हो, राम्राहरुमध्ये पनि सर्वोत्तम व्यक्तिहरुको समूह अर्थात् पार्टीको कर्तव्य हो यो।
(यो ऐतिहासिक लेख चे ग्वेभाराले कार्लोस क्वीजानोलाई पत्रको रुपमा लेख्नुभएको थियो। कार्लोस उरुग्वे नामक ल्याटिन अमेरिकी देशको राजधानी मोन्टेभिदेओबाट प्रकाशित हुने वामपन्थी साप्ताहिक पत्रिका Marcha का सम्पादक थिए। यो लेख उहाँले संयक्त राष्ट्र संघलाई सम्बोधन गरेपछि भएको उहाँको अफ्रिकी राष्ट्रहरुको ३ महिने भ्रमणको क्रममा लेख्नुभएको थियो। यो लेख Marcha को मार्च १२, १९६५ अंकमा र Varde Olivo पत्रिकामा अप्रिल ११, १९६५ मा Socialism and Man in Cuba शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो।)
स्रोतः राजेन्द्र महर्जनको ‘समाजवादकाे सपना’ किताबबाट
(२०७७ श्रावण ११, आईतवार) १०:५१ मा प्रकाशित